Qor Qormadayda Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Qorista Qormadayda ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Sida Loo Qoro Qormadayda
Waxaa jira arday badan oo kulleej ah oo had iyo jeer isku dayaya inay ogaadaan sida loo qoro qoraalkayga fursadda waxbarasho ee ugu habboon. Qaarkood waxay leeyihiin fikrado aad u fiican laakiin kaliya ma lahan xirfadihii lagama maarmaanka u ahaa hawl qoritaan guul leh. Tusaale ahaan: arday fikrad weyn ka haysta warqad laakiin aan la imaan karin qaabka saxda ah ama fikradda mowduuc gaar ah. Mararka kale waxaa jiri kara wax aad u gaar ah oo ardaygu doonayo inuu wax ka qoro laakiin iyagu ma haystaan ​​macluumaad ay wax kaga qoraan si gaar ah. Si kasta oo ay dacwadu ahaato, waxaa jira qaabab ardayda kuliyadaha ay ugu qoraan qoraalkooda.
Ardayda kulleejadu waxay eegi karaan siyaabo badan oo kala duwan oo adeegga maqaalku u caawin karo. Hal adeeg ayaa loo yaqaan qor qoraalkayga adeegga internetka. Adeegani wuxuu ardayda u oggolaanayaa inay qormooyinkooda ku qori karaan khadka tooska ah iyagoo adeegsanaya barnaamijka softiweer ee ka caawiya ardaygu inuu qoro qormada min bilow ilaa dhammaad. Marxalad kasta oo ka mid ah hannaanka qorista ayaa loo dhammeeyaa siday u kala horreeyaan ardayduna si fudud ayey u raacaan tilmaamaha la siiyay. Marka qormada la qoro oo la gudbiyo, adeegga qoraalka ayaa u diraya ardayga iimayl ama warqad dhammaystirka.
Qoritaanka qoraalo caado u ah ujeedooyin kala duwan ayaa sidoo kale la heli karaa. Haddii ardaygu u baahan yahay inuu qoro curis gaar ah si uu u helo buundo wanaagsan, waxay raadin karaan shirkad bixisa adeegyo qorista qormada ah. Tan waxaa ka mid ah akhrinta iyo tafatirka qormada ka dibna qorista iyo dib u qorista maqaalka caadada ah. Nidaamku wuxuu u shaqeeyaa ardaydaas waxay u baahan yihiin inay qoraan qormo ku habboon shuruudaha saxda ah ee looga baahan yahay inay helaan buundada ay doonayaan.
Intaas waxaa sii dheer, ardaydu sidoo kale way isticmaali karaan adeegyadan haddii ay raadinayaan inay qoraan qormooyin loo isticmaali doono fasalka. Ardaydu waxay caawimaad ka heli karaan howshan iyagoo raadinaya shirkad bixisa qoraallo qoraal ah oo loo isticmaali karo fasalka. Moodelladani guud ahaan waxaa ku jira mowduuca qormada iyo mawduuca uu qoraagu wax ka qorayo. Qoraagu wuxuu si fudud u dul marayaa sadar kasta oo uu buuxiyaa meelaha bannaan sida ugu habboon.
Qorista qoraalada ujeedooyin kala duwan ayaa ah kaliya hal sabab oo ay dadku u adeegsadaan adeeggan. Qoraa sidoo kale wuu adeegsan karaa adeegan marka ay doonayaan inay u qoraan warqad sheeko ama qoraal. Waxay ka heli karaan caawimaad dhammaystirka qoraalka ama buugaagta waxayna ku qori karaan khadka tooska ah iyada oo loo marayo adeeg leh dhammaan tilmaamaha saxda ah iyo xogta looga baahan yahay habka qorista. Qoraagu wuxuu si fudud u adeegsadaa qaabka xigashada saxda ah ee waraaqaha ka dibna wuxuu u gudbiyaa qormada markuu dhammeeyo adeegga.
Xaaladaha badankood ardaygu wuxuu ka heli doonaa noocyada kala duwan ee taageerada qorista tacliinta khadka tooska ah. Haddii qofku kaliya u baahan yahay xoogaa caawimaad ah si uu u dhammaystiro meeleynta hal mowduuc illaa mid kale, wuxuu si fudud uga raadin karaa khadka tooska ah shay-baarka qoraalka. Xaaladaha badankood shaybaarku si sahlan ayuu u aqrisan karaa waxayna u sahlaysaa qofka inuu fahmo qaabka qoraalka tacliinta. Marar badan shaybaarada waxaa bixiya lataliye tacliimeed oo horay uga soo shaqeeyay qormo. La-taliyaha ayaa ku siin doona caawimaad si shaybaar ah tusaalooyin ardaygu u adeegsan karo.
Marka laga hadlayo mowduucyada lagu daboolayo heerarka kala duwan ee daraasadaha, waxaa jira mowduucyo badan oo kala duwan oo loo isticmaali karo ujeedooyinkan. Waxaa jira mowduucyo badan oo kala duwan oo loo isticmaali karo markay tahay gelitaanka kuleejka, gelitaanka dugsiga sare, koorsooyinka sharfidda iyo koorsooyinka ka hor-caafimaadka. Markay tahay qormada heerarkaan, qoraalladu waa inay la kulmaan heerar gaar ah oo looga baahan yahay mid kasta oo ka mid ah heerarkan. Ardaydu waa inay waqti siiyaan barashada sida loo qoro qormooyinkan iyo qaabka heerka aqooneed ee qormada loo diyaarinayo. Adeegyada badankood waxay bixiyaan kaalmo sida ay u kala horreeyaan qormooyinka heerka tacliimeed iyo sidoo kale noocyada kale ee qorista taageerada qorista.
Maaddaama macallimiinta badankood ay leeyihiin degello internet oo u gaar ah, macallimiinta badankood waxay u oggolaan doonaan ardaydooda inay dhigaan boggaggooda shaqsiyadeed oo ay ku jiraan macluumaadka shaqsiyadeed. Qaar badan oo ka mid ah boggaga internetka ee aqoonta leh waxay leeyihiin qaybo dhan oo loogu talagalay qormooyinka ay qoraan ardayda. Waraaqahan tacliimeed waa ku-dhaqanka ugu fiican ee kulleejada mustaqbalka iyo waraaqaha cilmi-baarista iyo qorayaasha waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay u adeegsadaan laylisyadan si ay ugu horumariyaan xirfaddooda qorista ayna u noqdaan qoraalo qoraal fiican.